အပြာရောင်ဆေးလုံးထိုး - Viagra ကိုဘာကြောင့်လူငယ်များကိုရောင်းချနေတာလဲ။ (ကြည့်ရှုသူ) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အပြာရောင်ဆေးလုံး-pushers: အဘယ်ကြောင့် Viagra လူပျိုတို့စျေးကွက်ခံရသလဲ? (ပရိသတ်)
ဗြိတိန်နိုင်ငံကမကြာမီ Viagra ဆေးညွှန်းမပါဘဲဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ရှိရာကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
... ယောက်ျားမျိုးဆက်တစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသောအရွယ်ရောက်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်၏ထူးခြားထင်ရှားသောဆွဲဆောင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံမှန်လိင်သည် vanilla ဖြစ်သည်။ 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု' သည်ခေတ်သစ်ရောဂါဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများအနေဖြင့်ယင်းကြောင့်ကုသမှုခံယူရန်အထောက်အထားများစွာရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်သောကိန်းဂဏန်းများအရ A&E တွင်တက်ကြွနေသောဗြိတိန်အမျိုးသားလူငယ်များသည်အလွန်အမင်းစွဲမြဲမြဲမြံသောစိုက်ထူမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုအံ့သြစွာတွေ့ရသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသက်တမ်းကိုအသုံးပြုရန် priapism အတွက် ၀ င်ခွင့်အရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တွင် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကထိုအကြောင်းအရင်းမှာလူငယ်များသည် Viagra ကိုအခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်တွဲဖက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။
ဤသည် Viagra တာဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ရှည်လျားဘို့မယ်ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝသိမ်းထားချင်သူအသကျကွီးသူ၏ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်ယူဆသူမည်သူမဆိုတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာအဖြစ်လာနိုငျသညျ။ ယခုမူကား, နာမည်ကြီးအပြာဆေးပြားပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့ကြသည် 20 နှစ်အကြာ, သူတို့ကလူငယ်များများအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ကြသည်။ သို့မဟုတ်ပါကယူချင် - အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျား, အသက်တာ၏ချုပ်ထဲမှာတဲ့ Viagra လိုအပ်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်မေးရန်တစ်ဦးကကျိုးကြောင်းဆီလျော်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ပြီးသားအလုံအလောက် virile ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
Marketing ကိုဇာတ်လမ်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်သည်။ 2014 ခုနှစ်, အမှတ်တံဆိပ်အေဂျင်စီ Pearlfisher ရုရှားစျေးကွက်အတွက် Viagra rebrand မှငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်ကိုတစ်ဦး '' ပြောင်းလဲနေတဲ့စားသုံးသူပရိုဖိုင်းကို '' အဘို့အ Pfizer ရဲ့မူးယစ်ဆေးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ နှုတ်ကပတ်တရား၏အဆုံးမှာ '' တစ်ဦးက '' ကပိုပြီး tumescent ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ကျယ်ဝန်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး '' လျှပ်တပြက်, အက်ကွဲ, ပေါ့ပ် '' ခံစားရှိသည်ဖို့ - ကသွားဖုံးဝါးတစ် packet ကိုတူဒါ box ကိုဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ Viagra '' အစွမ်းထက်နှင့်ပြောင်းလဲနေသော '' ယောက်ျားကမ်းလှမ်းခံရဖို့, 'ပရီမီယံအထောက်အထားများ' 'နှင့်အတူတစ်ဦး Aspire မူးယစ်ဆေးအဖြစ်နေရာယူတပ်စွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါကြော်ငြာ babble ကနေလည်းအသံပေမယ့်အစီအစဉ်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပုံရသည်။ Young ကရုရှားယောက်ျားယခုညဦးယံရဲ့အဆုံးမှာ Viagra တာသက်သာခံစားရ - နှင့်စွန့်ပစ် packets တွေကိုလမ်းများ litters သောပုံမှန်ထက် detritus အကြားဘုံမျက်မှောက်ဖြစ်လာကြပါပြီ။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသေး UK မှာအတူတူပင် rebrand ခဲ့သေးပါဘူး။ သို့တိုင်, လန်ဒန်မြေအောက်အပေါ်ကြော်ငြာတစ်ခုပြန့်ပွားအလားတူ drive ကိုလမ်းအောက်အကြံပြုထားသည်။ Viagra အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးဗြိတိန်ယောက်ျားမှာကိုဆောက်ခံရခံရဖို့ပုံရသည်; တဦးတည်းရဲ့လိင်ဘဝတက်ယူကာတစ်ဦး jolly elixir ။ '' ခုတင်ကယ်မနှုတ်, အွန်လိုင်းမှာ, 'တစျခုပိုစတာကပြောပါတယ်။ အခြားဖတ် 'Valentine Day ကိုအဘို့သင့်အစီအစဉ်များကိုဖွင့်ကုမ္ပဏီတွေ' '။ Viagra ၏ '' သဘာဝက '' ခေါက်-ချွတ်ဗားရှင်း: bargain မုဆိုးအဘို့, Poundland '' Nooky '' ရောင်းချပါတယ်။ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ, ဆေးဆိုင်များ '' တဲ့ Viagra Connect ကို '' တစ်ဦးဆေးညွှန်းမလိုအပ်ပါဘူးသောမူးယစ်ဆေး၏ over-the-counter ဗားရှင်းရောင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။ Viagra ၏တစ်ဦး packet ကိုတက်ထုတ်ယူခြင်းများမကြာမီညသူနာပြုတစ်ပုလင်းကိုဝယ်ယူသကဲ့သို့လွယ်ကူသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံက Viagra ဆေးညွှန်းမပါဘဲဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ရှိရာကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်စေမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ, Pfizer သည်နှင့်အညီ, ယောက်ျားကမေးရန်ဆရာဝန်ကိုသွားရှိခြင်း၏အရှက်မရှိဘဲပိုမိုလွယ်ကူစွာမူးယစ်ဆေးကိုင်ရကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထီးအရှက်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မူးယစ်များအတွက်ကြီးမားမှောင်ခိုစျေးကွက်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်မှာတော့အတု Viagra ၏£ 49.4 သန်းတန်ဖိုးရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ သင်ျခြိုမူးယစ်ဆေးဝါးများယခုအားလုံးဖမ်းဆီးရမိအတုဆေးပြားရာခိုင်နှုန်း 90 များအတွက်အကောင့်။ တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်ပုံပြင်အတ္တလန္တိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထွက်ကစားနေသည်။ 2016 အတွက်တစ်ခုတည်းသီတင်းပတ်မှာတော့ကနေဒါရဲတပ်ဖွဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မှုအတွက်ခဲ့ကြသည်ရာခိုင်နှုန်း 2.5 ရာ၏, ထိုနယ်စပ်မှာအတုဆေးဝါးများ၏ $ 98 သန်းတန်ဖိုးရှိကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလမှာတော့မူးယစ်ဆေးဝါး၏ပထမဦးဆုံးယေဘုယျဗားရှင်း US မှာထင်ရှားလျက်, ဆီလီကွန်တောင်ကြားအမျိုးအစားများကိုအကျိုးအခွင့်အလမ်းကဲ့ရဲ့သံ။ ဇာခရိ Reitano တစ် 26 နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်, မကြာသေးမီက '' ရောမ '' တစ်ဦးယောက်ျား၏ကျန်းမာရေး '' မိုဃ်းတိမ်ကိုဆေးဆိုင် '' စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒီ app ယောက်ျား Viagra သို့မဟုတ်စျေးသက်သာ, ဥပဒေရေးရာဗားရှင်းကိုကိုင်ရဖို့အတှကျ '' ချောမွေ့စွာပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု '' များကိုရည်ရွယ်သည်။ ရောမရဲ့ပစ်မှတ်ဖောက်သည် 25 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားမှ 45- ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်လူပျိုတို့ Viagra တာ, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဖိအားအောက်တွင်ခံစားနေကြ: ဘယ်ကိုပြန်မေးခွန်းမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏, အဆိုပါရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်သူတို့ hedonistic လူနေမှုရှည်ရန်အလို့ငှာ, recreationally ကယူပြီးဖြစ်ကြောင်းပါလိမ့်မယ်။ Viagra ယောက်ျားကတရားဝင်နှင့်တရားမဝင်သည်အခြားတ္ထုများ, အမြိုးမြိုးနှင့်ယစ်မူးခြင်းကိုခံရနိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်, ဆဲလိင်ဖျော်ဖြေ။ ဒါပေမယ့်ဝိရောဓိ, လူပျိုတို့ကိုမိမိတို့၏ယခင်ထက်ပိုမို abstemious ဖြစ်လူသိများကြသည်ခက်ခဲမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထက်သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုပိုမိုစွဲဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုပိုပြီးဖွယ်ရှိသည်စမတ်ဖုန်းပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျား၏မျိုးဆက်ညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူ access ကိုအတူတက်စိုက်ပျိုးကြသည်။ အင်တာနက်ရဲ့ထူးခြားဆန်းပြားအယူခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်လိင် vanilla ပုံရသည်။ '' -Pornography စွဲ '' ခေတ်သစ်ဒေနာသည်နှင့်ယောက်ျားကုသမှုရှာကြသည်အကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားကြောင့်ထိုသို့ပြု၏ရှိသေး၏။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေတစ်ခုမှာအမေရိကန်လေ့လာမှုမှန်မှန် porn စောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျားခွန်အားမရှိခြင်းထံမှခံရဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်တွင်အီတလီလေ့လာမှုကိုမှန်ကန်ဘဝကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ကွာရှင်းဖော်ပြရန်ဟူသောဝေါဟာရကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia '' အတူတက်ရောက်လေ၏။
ညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်များလွယ်ကူမိန်းကလေးပါဝါနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်း၏နောက်ခံဆန့်ကျင်လာပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသူတို့ကိုယ်သူတို့တစ်ခု ပို. ပို. ဆိုးကျား, မစစ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကိုဆောက်ကိုရှာပါ။ အဆိုပါ #MeToo လှုပျရှားမှုနေ့ misbehaved ကြသူထင်ရှားတဲ့အထီးကိန်းဂဏန်းများဖြုတ်ချဆက်လက်; စစ်တိုက်ရာတွင်အော်ဟစ်သောအသံကိုအမျိုးသမီးတွေကိုမရှိတော့ကြောင့်လိင်မှကြွလာအထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးအခြို့သောလမ်းအတွက်ပြုမူဖို့ယောက်ျားထံမှဖိအားအောက်မှာခံစားရသင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ဒီမျှော်လင့်ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုစလုံးနည်းလမ်းတွေလျှော့ချနိုင်သည်။ သူတို့ကိုဆီသို့ဦးတည်ပါကတွန်းအားပေးအတွက် Pfizer ရဲ့အကျိုးစီးပွား - - နုပျိုတဲ့ Viagra ယူပြီးယောက်ျားများ၏အရေအတွက်မြင့်တက်အများအပြားသူတို့လည်းအချို့သောလမ်းအတွက်လုပ်ဆောင်ရမယ်ခံစားရဆိုတဲ့အချက်ကိုမှာအရိပ်အမြွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ် hypersexualised နှင့် hyperprudish ဖြစ်ပါသည်: ယောက်ျား macho, သေးပျော့ဖြစ်ပြောနေကြသည်။ ဒါဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိအံ့ဩစရာမရှိ။ သူထိနျးအစရှိသော၏ဘာသာရပ်အမှာစကားပြောကြားနေသောကြောင့်ယော်ဒန်မြစ် Peterson သည်စိတ်ပညာရှင်, မကြာသေးမီကကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်အစွန်းရောက်ကိန်းဂဏန်းဖြစ်လာသည်။ '' အနောက်ပုလ်၏စိတ်ကူး၌ယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး '' ဟုသူကပြောပါတယ်။ ငါသည်လူကပိုကောငျးစှာအမျိုးသမီးတွေထက်ကဒီအရှုံးခံစားရသံသယရှိကြသည်။ Viagra ရုံခွန်အားမရှိခြင်းကနေယာယီထွက်ပေါက်ပေးထားပါတယ်။